Heshiiskii qarsoodiga ahaa ee xisbiga wadani iyo jabuuti . | Gabiley News Online
Heshiiskii qarsoodiga ahaa ee xisbiga wadani iyo jabuuti .
August 30, 2017 - Written by maxamed jeex
Warar xog ogaal ah oo ka soo baxay waftigii uu hogaaminaayey gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani Mr moxamed cali oo loo yaqaan (hooyaday baa tidhi) iyo koox ka tirsan maamulka jabuuti ayaa waxay sheegayaan iney jiraan go,aamo lidi ku ah jiritaanka qaranimada JSL.
Kooxda reer jabuuti & xisbiga wadani ayaa waxa ku dhaxjira nin maalqabeen ah oo ay ilmaadeer dhaw yihiin gudoomiyeh moxamed cali.
Go,aamadaas wadani & kooxda jabuuti ay gaadheen ayaa waxaa kamid ah in marka ay ku guuleystaan doorashada JSL ay dhamaanba joojin donaan heshiiskii SL ay la gashay shirkada weyn ee magaceeda la yidhaahdo DP si aan loola tartamin dekeda dalka DJIBOUTI,intaa badalkeediina in kooxda jabuuti ay maalgaliso dhamaanba ollolaha uu xisbiga wadani ugu tartamaayo doorashada madaxtinimada JSL.
Shirkaas kooxada jabuuti iyo xisbiga wadani ay ku kulmeen ayaa waxyaabihii la isku afgartay waxaa ka mid ahaa 6 qodob oo muhim ah:
1. in kooxda iyo Xisbiga wadani ay iska kaashadaan sidii ay u soo saari lahaayeen gudoomiye CIRO.
2. in haddii uu Xisbiga wadani uu ku guulaysto doorashada si kama danbays ah loogu wareejin doono maamulka iyo maaraynta deegaanada ay sheegteen kooxdaas reer jabuuti ah sida (saylac,tokhoshi,ceel sheekh iyo lughaya).
3. Qodobka saddexaad ayaa waxuu sheegayaa in kooxda reer jabuuti loo fududayn doono doorashada ka bacdi dhamaanba khayraadka degmada saylac sida ciida dooxooyinka waraabood iyo bariisleh,biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo khayraadka badda.
4. Waxaa kaloo meeshaas lagu falanqeeyey sidii loo wiiqi lahaa illaha dhaqaaleh ee maal qabeenada beesha habar awal dhanka jabuuti iyo galbeedka SL ba
5. Ka dib marka uu ku guulaysto doorashada gudoomieyh CIRO iyo xisbigiisa wadani in ay jabuuti hormuud ka noqoto sidii ay miis iskugu keeni lahayd maamulka CIRO iyo maamul ku sheega muqdisho ee uu hogaamiyo MR FARMAAJO.
Haddaba waxaa u baahan in laga daba tago oo wax laga ogaado arimihii shirkaas lagu falan qeeyey ee aanan ilaa hadda la shaacinin marka laga reebo kuwa kor ku xusan, isla markaana laga digtoonaado dhamaanba waxii ka hor imanaya qaranimada iyo jiritaanka SL
Arrintan waxaa muddo badanba ka soo shaqaynayay oo muruq iyo maalba u huray sidii aan kor ku soo sheegnay koox uu hormuud ka yahay nin ay qaraabo dhaw ay yihiin gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani moxamed cali.
By jamaac xaaji cartan sheekh xuseen